Shaqooyin ka banaan shirgadda Golis | Puntland Today
Shaqooyin ka banaan shirgadda Golis
Posted on September 20, 2016 by Dal Joog	Garowe-(P-today)- Wade Cagaf Excavator 5 (Shan boos) 20-09-2016
Wade Cagaf Baallo/Sheewal 4 (Afar boos)
Mechanic birta culus 1 (hal boos)
Shuruudaha laga doonayo wade cagaf Excavator iyo Baallo/Sheewal:
Waa inuu waxqori karaa waxna akhrin karaa.
Waa inuu leeyahay ugu yaraan 5 sano khibrad shaqo.
Waa inuu kushaqayn karaa jaghamarka ku xiran cagafta Excavator.
Waa inuu wadi karaa kashaqeyn karaa cagafta (Baallo iyo wheel loader)
Waa inuu waxka garanayaan ciladaha kuyimaada qalabka korku xusan ee ay ku shaqeynayaan.
Shuruudaha laga doonayo Mechanic birta culus:
Waa inuu wax qori karaa waxna akhrin karaa.
Waa inuu leeyahay khibrad mechanic birta culus.
Waa inuu aqoon u leeyahay Matoorada iyo Gaadiidka guud ahaaneed.
Waa inuu aqoon u leeyahay haydaloolig birta culus (Hydrolic).
Waa inuu diyaar u yahay inuu shaqeeyo xilliyo kala duwan iyo goobo kala duwan.
Waa inuusan wax denbi ah ka gelin dadka iyo dalka.
Waaxda Shaqada & Shaqaalaha.